Imibuzo evame ukubuzwa - iShenzhen Byland Can Packaging Co., Ltd.
Ngikulungele ukufaka i-oda lami. Siyini isinyathelo sami esilandelayo?
Kunezindlela eziningana zokufaka i-oda.
1. Shayela ihhovisi lokuthengisa ku- +86 0755-84550616.
2. Umthengisi we-imeyili noma weWhatsapp.
3. Tin Amafomu Oda, yigcwalise ngokuphelele bese uyi-EMAIL kithi sales@bylandcan.com.
Yimaphi amafomu okukhokha owamukelayo?
T / T, Western Union, L / C noma Hlola kusengaphambili uma kungekho akhawunti esunguliwe.
Yini i-oda eliphansi lama-Stock Tins?
500 amathini aphelele, amacala agcwele ento ngayinye ekhethelwe amathini angenalutho ngaphandle kokuphrinta.
Yini i-oda elincane leTinki yangokwezifiso?
Ngokuya ngosayizi nokwakheka kwethini uhla lobuningi izingcezu ezingama-5,000 - 25,000. Izinto ezidinga ithuluzi elisha zizodinga ubuncane obukhulu kanye nesikhathi sokuhola esinde. Sicela ugcwalise uphenyo lwethini langokwezifiso kithi noma ushayele abamele abathengisi ngemininingwane ethile kuma-oda ethu amancane. Sicela uxhumane nathi ukuthola imininingwane ephathelene nophenyo lwakho oluthile.
Singathanda ikani langokwezifiso elibhalwe igama lethu. Ingabe lokhu kuyinto enganikezwa ngumhlaba?
Yebo. Ngomhlaba Can prints customgraphgraphy on metal, in-house, using the state-of-the-art 6 color color line. Sinomnyango ohlanganiswe ngokuphelele wezinsizakalo zezobuciko nowokulungiselela ukuqondisa amakhasimende ngezinyathelo. Futhi sinamakhono wokuphrinta edijithali ngamanani amancane.
Ngidinga ikani mude / likhudlwana kancane kunosayizi wesitoko sakho. Ingabe lokhu kulula ukukwenza?
Ngokuya ngokwakhiwa kwethini singakushintsha ukuphakama kwamathini amaningi ayindilinga noma amahle ngokulula ngamathuluzi akhona we-oda langokwezifiso. Amathini angenamthungo noma adwetshiwe azodinga i-tooling entsha yanoma yikuphi ukulungiswa kosayizi. Sihlala sakha izinto ezintsha futhi sitshala imali kubuchwepheshe bamuva obuzohlinzeka ngezinketho eziningi kumakhasimende ethu.
Sithanda ithini elilingana ngokwezifiso. Ngabe i-Byland ingakhiqiza osayizi abangama-100% nobukhulu?
Ithimba lakwaByland Can's Engineering lingakha isakhiwo esisha sesitshalo esinikezwe isikhathi kanye nokutshalwa kwemali okudingekayo ukwenza lula ukukhiqizwa okuzenzakalelayo. Siphinde futhi sithole izinto ezintsha ezikhungweni zaphesheya kwezilwandle lapho kuyisixazululo esihle kakhulu samakhasimende Ngu-Land Can uzohlola iphrojekthi ukuthola indlela engcono yokuqinisekisa ukulethwa komkhiqizo osezingeni eliphakeme ngesikhathi esilinganiselwe.
Siyini isikhathi sakho esivamile sokuhola setayela langokwezifiso?
Ama-3-5weeks ane-tooling ekhona nomsebenzi wakho wobuciko. Ngazo zonke izinqubo ezingaphansi kophahla olulodwa kusuka kumqondo kuya ekuqedeni, singanikeza ukulawula kanye nokuguquguquka kanye nokulethwa okufika ngesikhathi kumakhasimende ethu.
Kufanele ngi-oda kusenesikhathi kangakanani ukuqiniseka ukuthi ngizowathola yini Amathini wami Wokwezifiso ngesikhathi samaholide?
Sikukhuthaza ukuthi uhlele kusenesikhathi ngangokunokwenzeka. Ukuxhumana kuyisihluthulelo! Uma kunemikhawulo ebekiwe edinga ukuhlangatshezwa nge-oda langokwezifiso, yazisa omele abathengisi bethu ukuthi abeke isikhathi sini. Singabuyela emuva kusukela osukwini lokulethwa futhi sinikeze umugqa wesikhathi wokuthola i-oda lokuthenga, umsebenzi wobuciko nokuvunywa kobufakazi. Njengawo wonke amaphrojekthi wangokwezifiso, izinguquko zingabambezela ukuthunyelwa kokugcina kwe-oda lakho. Ngezikhathi zamanje zokuhola sithumele i-imeyili noma ushayele ku-0755-84550616 bese ukhuluma noMmeleli Wokuthengisa.
Ingabe amathini aphephile ngemikhiqizo yokudla? Singayithola yini incwadi ethi amathini aphephile ekudleni?
Amathini okuhlobisa ayiphakheji eyamukelekayo yemikhiqizo yokudla. Singancoma ukumbozwa kwangaphakathi kwaleyo mikhiqizo ene-asidi noma esekwe emanzini. Sisebenzisa uyinki nokugunyazwa kwe-FDA futhi singanikeza ngemibhalo evela kubahlinzeki bethu. Sihlolisiswa minyaka yonke ngamakhasimende amaningi e-Fortune 500 futhi siqinisekisiwe ukuhlangabezana nezindinganiso eziphakeme zabakhiqizi bamaphakheji wokuxhumana nokudla. Zonke izakhiwo zethu ziyiSQF2 eqinisekiswe yiSafe Quality Food Institute.
Siyini isikhathi sakho sokuhola samathini wamasheya?
Amaviki angu-2-3 kuya ngesizini nokutholakala ngesikhathi se-oda lakho. Ukuzibophezela kuhlelo lwangempela lwesitoko lonyaka wonke lwazo zonke izinto ezifakiwe, imvamisa senza kangcono kunesikhathi sethu sokuhola esishiwo.
Ngifanele uku-oda kusenesikhathi kangakanani ukuqiniseka ukuthi ngizolithola i-oda lami ngesikhathi soMkhosi Wentwasahlobo, ngithole wonke amathini wami?
Sikukhuthaza ukuba u-ode ngesikhathi samaholide asebusika. Kodwa-ke, uma ungaholi ngasekupheleni kwehlobo, lokhu akusho ukuthi ngeke uzithole amathini akho. Sisebenza ukugcwalisa njalo isitoko sethu. Ngemininingwane nge-inventory ethile usithumelele i-imeyili noma ushayele ku-0755-84550616.
Ukuthumela & Freight
Uthumela kanjani futhi izindleko zempahla zizoba yini?
I-Byland Can Ships ngokusebenzisa Izithwali Ezivamile (LTL / TL). Sithumela futhi nge-UPS, i-DHL ne-FEDEX uma sicelwa amakhasimende ethu, kepha lokhu akuyona inketho enhle ngaso sonke isikhathi.
Kungani ungakwazi ukuthumela ngomuso ngosuku olulandelayo?
IByland Can Co ayikwazi ukuthumela ngomkhumbi ngosuku olulandelayo, ngenxa yeshejuli yamanje yokuthumela. Isikhathi esivamile sokuhola sika-Byland Can amaviki ama-2. Lapho kungenzeka khona, sizozama ukuthumela ngokushesha uma isitoko sitholakala futhi nohlelo lokuthumela luvumela. Kwezinye izimo abasabalalisi bethu bangathumela ngokushesha okukhulu.
Silimele amathini. Kubonakala sengathi kukhiqiza umonakalo. Yini okufanele siyenze?
Uma uthole amathini ozizwa unamaphutha okukhiqiza, thatha lezi zinyathelo ezilandelayo.
1. Shayela omele ukuthengisa kwakho.
2. Thumela amasampula wamathini. Lokhu kuzokhonjiswa kumnyango wethu we-QA ukuze uhlaziye.
3. Lapho umnyango wethu we-QA usuphenye ngomonakalo, omele abathengisi bakho uzobiza ukuxoxa ngokutholakele.
Kubonakala sengathi kulimale impahla. Yini okufanele siyenze?
Uma uthole amathini ozizwa ukuthi anomonakalo wezimpahla, thatha lezi zinyathelo ezilandelayo.
1. Bhala amanothi awo wonke umonakalo ngqo kuMthethosivivinywa Wokulayisha noma kwifomu lokulimaza i-UPS noma i-FEDEX. Uma ungenzi lawa manothi ungahle ungakwazi ukufaka isicelo somonakalo.
Shayela umphathi othwala ukuletha isimangalo. Kufanele bakuthumele ngefeksi ikhophi lefomu lokufuna ukugcwaliswa bese ubuyiselwa ngefekisi.
Angiwatholanga wonke amathini engiwa-odile. Ngabe okunye ngizokuthola ngokuthunyelwa kamuva?
Ngokuya ngesikhathi sonyaka, yonke imiklamo noma osayizi oba-ode kungenzeka noma bangabi khona esitokweni. Uma ungawatholanga wonke amathini ku-oda lakho:
1. Hlola uhlu lokupakisha ukubona ukuthi amathini abuyiselwe emuva yini.
Uma izinto ezingekho zibuyiselwe emuva, wonke amanye amathini wakho azothunyelwa kuwe ngokushesha lapho esezotholakala. Uma ungafisi ukuthola amathini abuyiselwe emuva, kuzodingeka ushayele omele abathengisi bakho ukukhansela ibhalansi.
3. Uma uhlu lokupakisha lungakhombisi lezi zinto zi-odolwe emuva, shayela abamele abathengisi bakho futhi bazokujabulela ukuthola ukuthi kungani ungatholanga i-oda lakho eliphelele.
Yikuphi okungcono ukuqoqa noma ukuHlelwa kwangaphambili?
Ngezansi umehluko phakathi kokukhokhelwa kwangaphambili nokuqoqwa kokuthunyelwa.
1. Qoqa Ukuthunyelwa: Inkokhelo yezimpahla ifuneka lapho kuthunyelwa impahla. Isheke lizodinga ukuthi linikezwe umshayeli ngaphambi kokukhipha i-oda lakho.
2. Izimpahla ezikhokhelwa kusengaphambilini: Inkampani yaseByland Can izokwengeza izindleko zezimpahla kwi-invoyisi yakho. Kukhona imali yokuphatha esetshenzisiwe ku-oda.
3. I-Byland Can imikhumbi yomibili eqoqa futhi ekhokhelwa kuqala i-Freight FOB Factory, ngaphandle kokuhlukile.
Kusho ukuthini i-FOB?
I-FOB isho ukuthi i-Freight On Board. Lokhu kusho ukuthi impahla iba impahla yekhasimende ngesikhathi ishiya iphuzu le-FOB. Zonke izimangalo zomonakalo wezimpahla kumele zigcwaliswe ngesithwali esilethayo, ngaphandle kokuhlukile.
Nge-Can Can ayithumeli i-COD.